Kooxda Barcelona oo ka jawaabtay dalabkii ay Manchester United ka gudbisay Ansu Fati – Gool FM
(Manchester) 29 Sebt 2020. Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa ka jawaabtay dalabkii ay Manchester United ka soo gudbisay Ansu Fati.
Naadiga ka dhisan dalka Spain ee Barcelona ayaa hoos u dhigtay dalabkii ay Manchester United ka soo gudbisay oo ay ku doonaysay inay kula wareegto Fati.
Barcelona ayaa iska diiday dalab ku kacayay 136 milyan oo gini oo u dhiganta 150 milyan oo euro ama 175 milyan oo dollar oo ay kooxda Manchester United ka soo gudbisay Ansu Fati ka hor inta uusan da’yarkan heshiis cusub qalinka ugu duugin kooxda ka dhisan garoonka Camp Nou.
Sida ay warinayso Catalunya Radio, Kooxda lagu naynaaso Red Devils ayaa dalabkeedii ay ku doonayso 17-sano jirkaan hoos loo dhigay, maadaama qiimaha lagu burburin karay heshiiskiisa waqtigaas uu ku kacayey 154 milyan oo gini oo u dhiganta 170 milyan oo euro ama 198 milyan oo dollar.
Yeelkeede, Blaugrana ayaa u sheegtay Manchester United in heshiiska cusb ee Fati lagu burburin karo Adduun dhan 363 milyan oo gini oo u dhiganta 400 milyan oo euro ama 467 milyan oo dollar.
RASMI: Kooxda Real Madrid oo shaacisay Liiska xiddigaha ay kaga qeyb galayso kulanka Real Valladolid... (Miyey u soo laabteen Hazard iyo Asensio?)